မြန်မာယူနီကုဒ် စံစနစ်သို့ ကူးပြောင်းသုံးစွဲရန် မိုဘိုင်းဖုန်း နှင့် ကွန်ပျူတာ အမျိုးအစားအလိုက် နည်းလမ်းများ – Myanmar Unicode® Migration
မြန်မာယူနီကုဒ် စံစနစ်သို့ ကူးပြောင်းသုံးစွဲရန် မိုဘိုင်းဖုန်း နှင့် ကွန်ပျူတာ အမျိုးအစားအလိုက် နည်းလမ်းများ
အန်းဒရိုက် (Android) အန်းဒရိုက် ၄.၄ (KitKat) နှင့်အထက် (၁) ဘာသာစကား (Language) ပြောင်းရန် (သို့) ဂျီဘုတ်၊ ပုဂံ၊ ဖရိုးဇဲန် အစရှိသော (Gboard, Bagan, Frozen, etc.) ကီးဘုတ်တွင်ယူနီကုဒ်ရွေးချယ်ရန်
(၂) သီးမ် (Theme) ပြောင်းရန် (သို့)
(၃) ဖောင့် (Font App) ထည့်သွင်းရန် (သို့) (zfont,ifont etc.)
(၄) ရူ့ထ်(root) ပြုလုပ်၍ဖောင့်အမှန်သွင်းရန်(သို့)
(၅) Firmware လဲရန်
အခြား အမ်ယူအက်ခ်စ် (MCF MUX) ကဲ့သို့သော SMS App များ
အိုင်ဖုန်း (iPhone) အိုင်အိုအက်စ် ၁၃ (iOS 13) မူလ (built-in) ဖောင့် သုံးရန် မူလ (Built-In) ကီးဘုတ် (သို့) တီတီ ကီးဘုတ်တွင် ယူနီကုဒ်ရွေးချယ်ရန်
အိုင်အိုအက်စ် ၁၀ မှ ၁၂ အထိ မူလ (built-in) ဖောင့် သုံးရန် တီတီကီးဘုတ်တွင် ယူနီကုဒ်ရွေးချယ်ရန်
အခြား ယူနီကုဒ်ဖောင့်ပရိုဖိုင် (Font Profile) သုံးရန်
ဝင်းဒိုးစ် (Windows) Windows 10/8 and Office 2013 နှင့်အထက် မူလ (built-In) ဖောင့် (သို့) ပြည်ထောင်စု ၂.၅ (သို့) နှစ်သက်ရာသုံးရန် မူလ (Built-In) (သို့) ကီးမက်ဂျစ် (Keymagic) (သို့)ကီးမဲန် (Keyman) ကီးဘုတ်
InDesign CC နှင့်အထက် မူလ (built-In) ဖောင့် (သို့) ပြည်ထောင်စု ၂.၅ (သို့) နှစ်သက်ရာ (Indic Options On) သုံးရန်
အခြား Windows and Office ပြည်ထောင်စု ၁.၈ သုံးရန် ကီးမက်ဂျစ် (Keymagic) (သို့) ကီးမဲန် (Keyman) ကီးဘုတ်
အခြား InDesign ပြည်ထောင်စုစာအုပ် (Pyidaungsu Book) သုံးရန်
မက်ကွန်ပျူတာ (Mac OS) မူလ (built-In) ဖောင့် (သို့) ပြည်ထောင်စု ၂.၅ (သို့) နှစ်သက်ရာသုံးရန် Myanmar3Bundle (သို့) ကီးမက်ဂျစ် (Keymagic) (သို့)ကီးမဲန် (Keyman) ကီးဘုတ်
လင်းနက်စ် (Linux) မူလ (built-In) ဖောင့် (သို့) ပြည်ထောင်စု ၂.၅ (သို့) နှစ်သက်ရာသုံးရန် မြန်မာ ၃ (Burmese MM3) ကီးဘုတ်
ကွန်ဗက်တာများ (Converters) ယုန် (Rabbit), ပြောင်း (Pyaung for iOS), အမ်ယူအက်ခ်စ် (MUX for Android), ယူနီကွန် (UniCon.mitcloud.com for web)
Apple ကြန္ပ်ဴတာတြင္ Keyman ထည့္သြင္းနည္း